Ọmarịcha Thailand na -ehulata na mmiri: Rosewood Bangkok, ụlọ nkwari akụ mberede nke COVID
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Ọmarịcha Thailand na -ehulata na mmiri: Rosewood Bangkok, ụlọ nkwari akụ mberede nke COVID
Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Akụkọ na -emegharị na Thailand • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Rosewood Hotel na Bangkok
Mgbe emepere Rosewood, ọ degharịrị elu elu Bangkok. Rosewood Bangkok bụ akụkọ iri atọ, na-atụ n'anya nke ukwuu, ihe ịtụnanya ụlọ kwụ ọtọ. Ụdị ya ugbu a sitere n'ike mmụọ nsọ, ihe ngosi Thai a ma ama nke ekele. Silhouette ọgbara ọhụrụ bụ ngosipụta okike nke mmụọ Thai. A na -ekwusi ike na ọdịbendị Thai bara ụba site na ihe eji emepụta ime ụlọ yana ọmarịcha mmiri dị n'ime ụlọ nkwari akụ okomoko nke bụ ụtụ maka Bangkok, obodo e wuru na mmiri.
Ụlọ nkwari akụ Rosewood Bangkok dị okpukpu iri atọ dị na Bangkok, Thailand so na azụmaahịa na-esiri ike ile ọbịa nke ọrịa COVID-30 merụrụ ahụ nke ukwuu.
Mmachibido ndị njem mba ofesi emeela ka ọnụ ahịa ndị njem kwụsịlata.
"A gwara ndị ọrụ Rosewood maka ọkwa mmechi na Tuesday," onye nnọchi anya ụlọ nkwari akụ kwuru, ebe ụlọ nkwari akụ ahụ mechiri na Satọde.
Onye nnọchite anya ahụ kwuru okwu ka a ghara ịkpọ aha ya, ụlọ nkwari akụ ahụ jụrụ ikwu okwu n'ihu.
Mgbe emepere Rosewood Bangkok kwuru na ọ bụ akara aka imepụta akara ngosi ọhụrụ maka isi obodo Alaeze na ọkwa ụwa. Ugbu a COVID-19 gburu ya.
Rosewood Bangkok bụ ọrụ ama ama nke Rende Development Co., Ltd. nke ezinụlọ Thaksin Shinawatra, onye bụbu praịm minista Thailand mepụtara.
Paetongtarn “Ing” Shinawatra, onye isi osote onye isi Rende na nwa nwanyị Thaksin dere na Facebook, "Mkpọchi nwa oge nke Rosewood Bangkok bụ iji weghachite ntọala ya n'etiti enweghị ntụkwasị obi."
Ekwuru na nchekwa nke ndị ọrụ ụlọ oriri na ọ hotelụ andụ niile na ndị ọbịa bụ ihe kacha mkpa.
Ọtụtụ ndị na -ekiri ihe na -eche na enwere ike ree ụlọ nkwari akụ ahụ ma ọ bụ nyegharịa aha ọzọ mgbe emechiri ya.
Marisa Sukosol Nunphakdi, onye isi ala Njikọ ụlọ oriri na ọ Thaiụ Thaiụ Thai, rịọrọ gọọmentị ka o kwe ka ndị na -eri nri na họtel mepee ọzọ na -erube isi n'iwu iji belata mgbochi n'ụlọ nri.
Marisa kwuru na ebe mgbatị ahụ, ọdọ mmiri, na ọnụ ụlọ nzukọ na họtel.